» kwani litfest Iyo Waayaha Cusub oo Bandhig Ku Qabtay Nairobi(Sawiro)
kwani litfest Iyo Waayaha Cusub oo Bandhig Ku Qabtay Nairobi(Sawiro)
Dec 10, 2012 - jawaab	Aqrisatay:1791kwani litfest oo ah urur aay ku bahooben qoraayasha ayaa waxaa aay Xaafada islii ee magaalada Nairobi ku qabteen Barnaamis aay sanadkiiba mar aay qabtaan kaasi oo aay ka soo qeeb galaan dad aad u fara badan.
Barnaamiskaasi maanta ka furmay xaafada islii ee Magalaada Nairobi ayaa intii uu socanayay waxaa heeso iyo wacyi gelin laga wacyi galinaya halista argagaxisada leedahay ku soo bandhigay dhalinta waayaha cusub oo beryahaanba halkaasi ka waday barnaamisyo aay ku wacyi galinayaan dhalinyarada Soomaaliyeed.
Barnaamiskaasi ayaa socon doono mudo shan maalin ah oo lagu soo bandhigi doono wax qabadka kwani litfest iyo wax yaabahi sanadkan ugu tala galeen bulshada.
shanta maalin ee uu socon doono barnaamiskaasi ayaa waxaa ka soo qeeb gali doono warsan shire oo ah gabar Soomaaliyeed ,oo ku tirisa gabayada luuqada ingariiska warsan ayaa maalinta berito ah ka qeeb geli doonta barnaamiskaasi aay soo qaban qaabiyeen kwani litfest.
sido kale waxaa ka soo qeeb galaya maalmaha uu socanayo barnaamiska Abwaanka weyn ee hadwaari oo lagu wado in maalinta jimcada ah dadka su,aalo ku waydiin doonan halka uu ka dhacayo barnaamiskaasi oo ah hoolka Carmal wadadda kow iyo tobanaad ee xaafada islii .